Dunida Muslimka oo dibadbaxyo uga jawaabtay go'aankii Trump ee Qudus - BBC News Somali
Image caption Dibad baxyada ugu waawayn waxay ka dhacayaan Baytullaxan
Xoogagga Israa'iil ee ku sugan deegaanada ay xoogga ku haystaan ee Daanta Galbeed ayaa ka hor tagaya Falastiiniyiin dibad baxayaal ah oo ka careysan go'aankii Trump uu Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'iil.
Dadka isu soo baxay ee Baytullaxam ayaa dhagxaan ku tuuraya ciidamada, waxaana loogu bedelayaa gaaska dadka ka ilmeysiiya. Waxaa jiro warar aan la xaqiijin oo sheegaya in dad ay ku dhaawacmeen rabshadaha.
Xiisadda Daanta Galbeed iyo Qudus ayaa aad u kacsan ka dib markii hoggaamiyayaasha Falastiin ay ku baaqeen in la isu soo baxo.
Shaacintii Donald Trump waxaa soo dhoweysay Israa'iil, balse waxaa si adag u cambaareeyay dowladaha Carabta iyo kuwa Islaamka.
Xulafada Mareykanka ee reer Galbeedka ayaa sidoo kale ka soo horjeestay tallaabadaasi Trump oo ah in Mareykanka uu ka weecday siyaasadda arrimaha dibadda ee soo jireenka ahayd ee la xiriirta in dhexdhexaad laga ahaado arrimaha Qudus.
Israa'iil ayaa markasta u arakto in Qudus ay tahay caasimaddeeda halka Falastiiniyiinta ay sheegayaan in Bariga Qudus ay tahay caasimaddooda mustaqbalka, halkaas oo Israa'iil ay ku qabsatay dagaalkii lixda maalmood ee 1967-dii.
Laakiin dowladda Mareykanka waxay noqoneysaa dalkii ugu horeeyay ee Qudus u aqoonsada in ay tahay caasimadda Israa'iil oo dowlad ahaan loo aasaasay 1948.
Xagey dibadbaxyada ka dhacayaan?
Muuqaallo laga baahiyay telefishinno oo laga duuway Baytullaxam waxay muujinayaan boqollaal qof oo dibadbaxaya oo ay hor taagan yihiin ciidamada Israa'iil.
Biyo ayey adeegsanayaan si ay u kala ceyriyaan dadka isu soo baxay, sidoo kale waxaa la arkayaan qiiq ka dhashay gaaska dadka ka ilmeysiiya. Dibadbaxayaasha waxay gubayaan taayerro.
Boqollaal askar dheeraad ah ayey Israa'iil geysay deegaanada ay haysato ee Daanta Galbeed. Rabshado waawayn ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa Bariga Qudus. Xuduudda Israa'iil iyo Qaza rabshado ka dhacayna waxaa ku dhaawacmay dhowr qof oo Falastiiniyiin ah.
Qeybta qadiimiga ah, oo ay ku yaallaan goobaha barakeysan, waxay aasaas u tahay qalalaasaha taariikhiga ah ee Bariga Dhexe.
Xisbiga Fatax oo uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamuud Cabbas wuxuu ku baaqay in dadka ay jidadka isugu soo baxaan, halka ururka Xamaas uu shaaciyay kacdoon cusub oo ka dhan ah Israa'iil.
Sidoo kale dunida Islaamka waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagu muujinayo sida looga careysan yahay go'aanka Trump ee Qudus.
Image caption Magaalada Kuala Lumpur, dadka soo baxay waxay gubeen muuqaal loo ekeysiiyay Trump
Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa salaadda Jimacaha ka dib isu soo baxay boqollaal qof oo ku dhawaaqayay "Qudus waa caasimadda Falastiin", waxayna muujiyeen sida ay u diidan yihiin in ay caasimad u noqoto Israa'iil.
Kumannaan qof oo taageersan Falastiin ayaa sidoo kale qabtay dibadbaxyo ka dhacay dalalka Urdun, Masar, Turkiga iyo Iraan.
Dalalka kale ee laga dibadbaxay waxaa ka mid ah Malaysia, Bangladesh iyo Indonesia iyo dalal ka ay Muslimiinta ku badan yihiin ee caalamka oo dhan.
Sidey beesha caalamka uga jawaabtay?
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ay "ka walaacsan tahay go'aanka halista ah ee uu qaatay Trump" kaas oo Qudus uu ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'iil.
"Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay si dhow ula socotay" xaaladda, ayaa lagu yiri qoraaal lagu daabacay wakaaladda wararka Soomaaliya SONNA oo la sheegay in dowladda ay soo saartay.
"Waxaan ugu baaqaynaa Dowladda Maraykanka in ay si dhab ah uga fiirsato halista go'aankan uu ku leeyahay mustaqbalka dalalka Bariga-dhexe iyo guud ahaan Caalamka", ayaa ku qoran warkan ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya.
Falstiin: Afhayeen u hadlay kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas ayaa sheegay in ''albaabadii cadaabta'' ay furmeen.
Faransiiska: Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa yiri ''Ma taageersanin go'aankan oo aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ah waana mid shaleyto mudan''.
Paksitan: Dowldda Pakistan ayaa tiri ''waxaa shallayto mudan in Trump uu iska dhaga tiray baaqyadii caalamka oo dhan uga imaanayay''.